'La Casa de Papel 5' - Kubudirira kwaNetflix kunosvika kumagumo | Bezzia
'La Casa de Papel 5': Kubudirira kweNetflix
Susana godoy | 07/09/2021 14:00 | Nhau
Chikamu chitsva che 'Iyo Pepa Imba 5'. Mwaka mutsva wakakamurwa kuita mbiri. Izvi zvinowanzoitika kana akateedzana achisvika mhedzisiro yawo sezvazvinenge zviri izvo. Asi panguva ino, Netflix yakave zvakare chikuva chesarudzo nekuda kwekubudirira kweakateedzana seizvi.
Kunyangwe sekuziva kwedu, haina kuzvarirwa mariri asi takazviona kekutanga paAntena 3. Asi ichokwadi kuti kusvetukira kuchikuva kwakaita kuti mamirioni avanhu vakwanise kuzviedza uye nokudaro vova zvinoshamisa mukati nekunze kwemiganhu yedu zvazviri chaizvo. Wakatoona here zvitsauko zvishanu zvekutanga?
1 'La Casa de Papel 5' yakakamurwa kuita zvikamu zviviri
2 Mwaka mutsva weLa Casa de Papel
3 Pachave neremangwana reLa Casa de Papel?
'La Casa de Papel 5' yakakamurwa kuita zvikamu zviviri
Rwendo rwange rwakareba, nekutora chikamu kwakawanda uye nguva dzekuonekana dzinovava, sezvavanogara vari. Asi takasvika kumwaka wechishanu wenyaya dzakaratidzika kunge dzaingova neimwe chete. Sezvatakambotaura, ma protagonists ayo mune tsvuku jumpsuit uye Dalí mask vakave vakakurumbira mavara mukati nekunze kwenyika yedu. Asi ichokwadi kuti nyaya yega yega yakanaka inofanira kusvika kumagumo sekuziva kwedu. Kunyangwe zvichitirwadza, ichokwadi kuti vanofanirwa kupera nesita. Saka Musi waGunyana 3, zvikamu zvishanu zvekutanga zvemwaka wechishanu zvakaburitswa uye zvimwe zvishanu zvichasvika paNetflix musi waZvita 5. Ehe, gore rino akateedzana achamiswa.
Mwaka mutsva weLa Casa de Papel
Hatisi kuzoita vapambi zvakare nekuti ipapo isu tatoziva zvinoitika, saka isu tichazongoti mushure mechikamu chekupedzisira chemwaka wechina, taida chechishanu nekukurumidza. Ichokwadi kuti panguva iyoyo paive nedzidziso zhinji pamusoro pekuti yechina ndiyo yaizoguma here. Asi Iko kusiira mafuremu akawanda mudenga pamwe kwakatipa fungidziro yekuti yechishanu yaizouya ndokusvika.
Asi inosvika muzviviri zvakawandisa uye zvinoita sekunge Plex Pina aida kupa chimwe chinhu zvakanyanya izvo vaoni vasina kutarisira. Nekuti kunyangwe hazvo yakakamurwa kuita mabatch maviri, ichokwadi kuti iwo anenge asina kugadziriswa marongero anenge angangoitwa muchikamu chekutanga. Uye zvakare, panoburitswa zvitsauko gumi panguva imwe chete, veruzhinji vanotoziva kana kujekeserwa nezvekuti izvo zvisingazivikanwe zvichatanga kugadziriswa. Izvo zvinoonekwa kuti chikamu chechipiri che'La Casa de Papel 5 'chinopa zvakawanda kune yemhepo ndege yemunhu wese uye nekudaro inogona kuenderana zvakananga nekuonekana.
Pachave neremangwana reLa Casa de Papel?
Panguva ino, vese vateveri vasingade kuti nhevedzano ipere, vatange kufunga nezvesarudzo nyowani. Pakave nekutaura kuti pamwe mumwe munhu achatora nzvimbo uye panogona kunge paine nhevedzano nyowani yakavakirwa pairi kana pamwe, makore gare gare, dzokera kunzvimbo yekutanga sezvakaitika nemamwe akawanda mazita isu atoziva kare. Kwechinguva, tinofanirwa kugadzirisa zvikamu gumi, izvo sekutaura kwedu zvakakamurwa kuita zvikamu zviviri.
Mwaka uno wakave nekurekodha kwakaomarara, nekuda kwedambudziko nekuda kweCoronavirus uye zvakare, nekuti chitsauko chimwe nechimwe chakareba awa rimwe chete, zvinoreva kuti chakawedzerwa zvishoma. Pakati pezviitiko zvaro tine Denmark, pamwe neSpain uye zvakare Portugal. Ndiyo imwe yenguva dzinonakidza kwazvo munzira dzese. Nekuti ndezvekuisa bhendi uye kunyangwe Muzvinafundo anenge, kusvika panogumira. Kunze kwekubheja pane mavara matsva uye kuvhara kunovavarira kuve wekupedzisa kubata. Ivo zvechokwadi vachadaro!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » 'La Casa de Papel 5': Kubudirira kweNetflix
Maitiro ekuwana mhasuru asi pasina kukosha kwehuremu